Mgbe nwoke ahụghị gị n'anya otú o si akpa àgwà | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 26/05/2022 18:15 | Nlekọta onwe onye, Di na Nwunye na Mmekọahụ
Ị nọ na-ekiri nwa oge? mmekọrịta gị anaghị arụ ọrụ nke ọma? Ọ na-akawanye njọ ma ị nweghị ike ịchọta ihe kpatara ya? Ikekwe onye gị na ya na-emekọ ihe anaghịzi enwe mmetụta dị otú ahụ na nke ahụ bụ isi ihe na-eme ka omume ụfọdụ ghọọ nsị. Mgbe nwoke ahụghị gị n'anya, olee otú o si akpa àgwà?
N'ọnọdụ ndị a ọ kacha mma dabere na mmuo ma tụkwasị obi na akara. Ma ọtụtụ n'ime ihe ịrịba ama ndị a na-ejupụta mgbe ígwé ojii ahụ nke ejighị n'aka na-egbochi ụzọ nke ịhụta ihe doro anya. Nke mbụ, anyị ga-anọpụ iche ma na-elekọta onwe anyị nke ọma, ka anyị ghara ikwe ka ihe mee ka i mee mkpebi siri ike.
1 Gịnị mere o ji adị gị ka ọ hụghị gị n'anya?
2 Mgbe nwoke ahụghị gị n'anya ọzọ, olee otú o si akpa àgwà?
2.1 Ọ naghị atụkwasị gị obi dị ka ọ dị na mbụ
2.2 Obi adịghị gị mma n'ebe ọ nọ
2.3 na-ewekarị iwe
2.4 enwela oge maka gị
2.5 Ị bụghịzi ụzọ ha
2.6 Atụmatụ ọdịnihu na-ebelata
Gịnị mere o ji adị gị ka ọ hụghị gị n'anya?
Mgbe e nwere ihe àmà na-egosi na ọ hụkwaghị gị n'anya, ọ pụrụ ịbụ nnọọ ihe doro anya. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ na-eju anyị anya ịmata ma nke a bụ ikpe, ebe ọ bụ na Ị nwere ike ịbụ onye nwere mmasị na ya ma ghara inye nkọwa.
N'ozuzu Ihe mbụ a na-ahụ bụ enweghị mmasị, ebe ọ bụ na nkọwa ndị ahụ ma ọ bụ ihe ngosi ịhụnanya nke na-adị mgbe niile na-efunahụ ya. Àgwà ya adịchaghị egosi ịhụnanya ma ọ bụ n’ebe anyị pụrụ ikwu na omume ya n’ihe banyere ịhụnanya ebelataworị.
Mgbe nwoke ahụghị gị n'anya ọzọ, olee otú o si akpa àgwà?
Nkọwa nwere ike ịbụ ọtụtụ, ihe na-apụtakarị bụ mgbe esokwaghị gị na mkpebi ha kacha mkpa. Mgbe e nwere ihe mgbaru ọsọ, a na-ajụkarị ha na onye òtù ọlụlụ ha, ọbụlagodi mgbe ha dị mkpa.
Ọ naghị atụkwasị gị obi dị ka ọ dị na mbụ
Enweghị ntụkwasị obi bụ otu n'ime ihe ịrịba ama. Mgbe mmadụ na-akwụwa aka ọtọ, ọ na-enwe mmetụta ịhụnanya na ntụkwasị obi mgbe niile n'ebe onye ọzọ nọ, na mgbakwunye, a pụghị ịnọgide na-enwe mmekọrịta ogologo oge ma ọ bụrụ na enweghị njikọ na nchebe dị otú ahụ.
Obi adịghị gị mma n'ebe ọ nọ
Enwere ọtụtụ isi ihe na-ekpuchi ajụjụ a na-adọrọ mmasị. Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị mma mgbe ị nọ n'akụkụ ya, ọ ga-abụ nke ahụ ị naghị enweta nkasi obi ahụ, ebe ọ bụ na okwu gị adịghị mma ma ọ bụ na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ọ naghị amasị ya, ị naghị enwekwa mmasị na ụlọ ọrụ ya, mana otu ihe na-eme. ahụ adịkwaghị gị mma ka mmadụ. N'ezie okwu ndị ị nwere adịkwaghị mma na nke ahụ anaghị eme ka mmekọrịta pụta.
Mgbe okwu ndị ahụ adịghị mma, ihe ọ bụla ọzọ gụnyere aura na-egbu egbu. N'ezie nkọwa niile dị njọ ịkpali mkparịta ụka. Ọ bụrụ na ọ nọ naanị n'ọnọdụ ọjọọ mgbe ọ nọnyere gị ma ọ bụ gbalịa ịchọta ọgụ nke mmụọ, ọ bụghị ezigbo ihe ịrịba ama.
Enwere ike ịhụ na mkparịta ụka adịghị mma. Ikekwe ebe tupu enwee mkparịta ụka karịa nke ọzọ, ọ nwere ike ịghọ ihe na-abụghị. Ọ bụrụ na enweghị ọgụ ọzọ ma ọ bụ esemokwu adịghị adị nwekwara ike ịbụ ihe ịrịba ama ọjọọ, Ebe ọ bụ na ka mmekọrịta na-aga nke ọma, a ghaghị igosi mmasị ụfọdụ ụdị esemokwu site n'oge ruo n'oge iji mee ka onye nke ọzọ too.
enwela oge maka gị
Ihe ịrịba ama ọzọ bụ mgbe o nweghị oge ịnọnyere gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ọ bụrụ na ị na-ekwu ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme atụmatụ ma ọ bịaghị, ọ bụ ihe na-enweghị mmasị. N'ezie mee ihe ngọpụ ka ị ghara ịbịa n'akụkụ gị, ebe ọ bụ na onye na-achọ ịhụ gị mgbe nile ga-eme ihe nile kwere omume iji nọrọ n’akụkụ gị.
Ị bụghịzi ụzọ ha
n'ezie ugbua anaghị ebido ịnọnyere gị ka ọ dị na mbụ. E nwere ọbụna mgbe ọ na-ewute gị ma ị rịọ ka e nyekwuo gị oge ọnụ. Ọ na-adịkwa gị ka ị na-arịọ arịrịọ.
A na-enwekwu ohere n'etiti nleta ọ bụlaỌbụna ọ na-apụ n'anya ruo ụbọchị ole na ole ma na-arụsi ọrụ ike mgbe nile. Mgbe ị tụbara ya n'ihu ya nwere ike inwe esemokwu ma ọ bụ na ọ chọghị ịma ihe na-eme.
Atụmatụ ọdịnihu na-ebelata
Atụmatụ ọdịnihu ndị ahụ ekesara echefuola. Ọ bụrụ na a naghịzi ekwu okwu banyere ịkwakọta ọnụ, ọ bụrụ na a naghịzi ekwu okwu banyere ụmụaka n'ọdịnihu na ọbụna na-ekere òkè ụfọdụ ihe omume, ọ bụ n'ihi na mmekọrịta ahụ na-ajụ oyi. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-agbalị ikwu banyere ya o nwedịrị ike iwewe ya, nke ahụ ga-akụkwa gị mmụọ.
Enwere ọtụtụ nkọwa ndị nwere ike iduga mmekọrịta na-ada ada. Dịka anyị kọwaburu, mmasị bụ ihe na-emeri n'usoro ihe omume a. Ihe nlele ahụ na-eme ya niile na n'ezie enweghị ike izo ya n'akụkụ niile. Karịsịa, ị ga-emerịrị leruo onwe ya anya, ọ bụrụ n’ezie na ọ na-ewute gị ma bụrụ onye na-abụghị nke pụrụ iche, ọ bụ n’ihi na onye ahụ adịghị eji ịhụnanya kpọrọ ihe.
N'etiti mmasị na akụkụ dị mma, ọ ga-abụ ịjụ otú ụbọchị gị si gaa, ịdabere na gị maka mkpebi ọ bụla, igosi ọchịchọ ahụ ịhụ gị n'oge ọ bụla na ọbụna ịkwalite echiche gị na azịza ndị na-adịghị mma ma ọ bụ dị mma, ma mgbe niile. ime too ịhụnanya na nkwado. Ọ bụrụ na isi akwụkwọ ndị a ada ada, mgbe ahụ ọ bụ n'ihi na ọ hụghị gị n'anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Nlekọta onwe onye » Mgbe nwoke ahụghị gị n'anya, olee otú o si akpa àgwà?
Amụma ndị ekweghị ekwe hapụrụ